Jamaal Khaashuqji: Mareykanka oo daabacaya warbixin ku saabsan dilkiisii | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Jamaal Khaashuqji: Mareykanka oo daabacaya warbixin ku saabsan dilkiisii
Jamaal Khaashuqji: Mareykanka oo daabacaya warbixin ku saabsan dilkiisii
Aqalka Cad ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu qorshaynayo inuu “goor dhaw” la hadlo Boqor Salmaanka Sucuudi Carabiya.
Arrintan ayaa waxa ay imanaysaa xilli maamulka Mareykanka uu isu diyaarinayo inuu daacabo warbixin ku saabsan dilkii weriyihii u dhashay waddanka Sucuudiga, Jamaal Khaashuqji.
Mr Khaashuqji ayaa 2018 waxaa si arxandarra ah loogu dhexdilay qunsuliyadda Sucuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga.
Warbixinta ayaa si wayn loo sugayaa in dilka ninkaasi ay ku xiriiriso hogaamiyaha ruuxiga ah ee Sucuudi Carabiya, Amiirka dhaxalsugaha ah Maxamed bin Salmaan.
Mr Biden ayaa sheegay inuu doonayo inuu “dib u qiimeeyo” xiriirka uu dalkiisa la leeyahay Sucuudi Carabiya, isagoo tilmaamay in Mareykanku uu doorbidayo inuu si toos ah ula tacaamulo Boqorka da’da ah ee Salmaan.
Hasayeeshee weriye ka tirsan BBCda ayaa waxa uu sheegayaa in Amiirka dhaxalsugaha ah Maxamed ay aad ula dhacsan yihiin da’yarta Sucuudiga inta badanna uu gacanta ku hayo boqortooyada.
Madaxweynaha Mareykanka ee xilka kasii dagaya, Donald Trump ayaa horay loogu eedeynayay inuu dhagaha ka fureystay xad-gudubyo bani’aadannimo oo lala xiriiriyay dhaxal sugaha Boqortooyada Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan, balse waxaa su’aalo la iska weydiinayaa waxa uu noqon karo mowqifka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka, Joe Biden.
Warbixin uu daabacay wargeyska “Washington Post” ayaa lagu sheegay in maamulka Donald Trump uu ka arrinsanayo sidii uu u aqbali lahaa codsi uga yimid Amiir Maxamed Bin Salmaan, kaasoo ku aaddan in dhaxal sugaha Mareykanka laga siiyo xasaanad ka ilaalineysa in dacwado looga soo oogo gudaha waddankaas.
Arrintan ayaa cirka kusii shareertay muranka la xiriira tallaabooyinka uu qaado Maxamed Bin Salmaan iyo sida ay arriahaas u wajihi doonto dowladda cusub ee uu hoggaamin doono Joe Biden, oo ah nin ka soo jeeda xisbiga Dimuqraaddiga, aadna uga mowqif duwan Donald Trump.
Codsiga xasaanadda ayaa, sida uu sheegay Washington Post, waxaa diiradda lagu saaray kiis ka dhan ah bin Salmaan oo uu Mareykanka u gudbiyay Sacad al-Jabri oo horay u ahaa sarkaal ka tirsanaan jiray sirdoonka Sacuudiga, haddana isagoo baxsad ah ku nool waddanka Canada.
Wargeyska ayaa intaas ku daray in ilo uu aqoonsigooda qariyay uu kasoo xigtay in Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ay qareennada Sacad ka dalbatay inay usoo gudbiyaan warqadaha dhinaca sharciga ee caddeynaya kiiskooda, si ay go;aan uga gaarto in la aqbalo codsiga xasaanadda ee Bin Salmaan, xilli waaxda caddaaladda ee Mareykankana ay tix galineyso in ay kiiskaas furto.
Markaas wixii ka dambeeya waxaa la filayaa in waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ay codsi u dirto mas’uuliyiinta waaxda Caddaaladda, kuwaasoo go’aankoodu uu yahay heer federaal.
Haddii ugu dambeyn la hirgaliyo xasaanadda Bin Salmaan, waxay micnaheeda tahay in magaciisa laga saari doono kiis walba oo uu Mareykanka ku lug leeyahay.
Previous articleClashes in Mogadishu throw Somalia’s political crisis into a dangerous new phase
Next articleBiden oo laalay xayiraadii saarneyd soo-galootiga Mareykanka (VOA).